ယေရှုခရစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သာမြော်လင့် | Apg29
ယခုပင်လျှင် 1 ကမ်ဘာဦး3ခုနှစ်, ငါတို့ဘုရာ&#
အဆိုပါမသိမမြင်နိုင်သောဖြစ်ပွားခဲ့သည်; ဘုရားသခငျသညျ၏ကိုယ်ပိုင်ယဇ်ပူဇော်သိုးသငယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်၏ရှေ့ကိုတက်ရောက်လေ၏။ ကျွတ်ကျမ်းယဇျပူဇျောချွန်ရှေ့ဆက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကသူကမျြးစောငျ။
ဒါကကျ၏တက်ယူကြောင်း3အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်း 1 ဘုရားသခငျ့ကယျတငျတျောမူသောအစီအစဉ်, မျှတမှုများနှင့်အပိုင်း3ယေရှု၏နောက်လိုက်အကြောင်းကြားစာ၏သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီ post မှာတော့အပိုင်း 1, ငါကတိထားရာကယ်တင်ရှင်ကနေတဆင့်ကျဆုံးခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတက်ယူလိမ့်မည်ကို၎င်း, ဓမ်မဟောငျးကမျြး၌ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၏အရေးပါမှုအပေါ်ယေရှုယဇ်ပူဇော်သည်သေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်။
1 ကမ္ဘာဦး3မြွေ (မာရ်နတ်) ဘုရားသခဆန့်ကျင်အပြစ်တရားမှအာဒံနဲ့ဧဝကိုရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင့ယခင်က "သင်သည်စားသောနေ့၌သငျသညျအသေသတ်ရမည်အဘို့အသငျသညျ, မစားဘဲနေရကြလိမ့်မည်သို့သော်အကောင်းနှင့်မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုသိကျွမ်းရာအပင်၏အသီး။ " ကမ္ဘာဦး 2:17 1 မှာအာဒံကဆိုပါတယ်ခဲ့သောကျနော်တို့ဧဝကိုမြွေရဲ့လှညျ့စားသည်မုသာစကားကိုနားထောင်ပုံကိုဖတ်ပါ "သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်သေရမည်မဟုတ်။ " သူမသည်တားမြစ်ထားသစ်ပင်များ၏အသီးကိုစားရန်သွေးဆောင်မှုအတွက် ပေး. , ပင်အာဒံအပြစ်သွေးဆောင်ရာအတွက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ နှင့်မိမိအပြစ်အတွက် unclothed, သူတို့ကကွယ်လွန်သွားဒီတော့ဘုရားသခငျသညျဆန့်ကျင်မနာခံမှု, သူတို့ဝိညာဉ်အားဖြင့်သေယခုအခါထိုအရပ်၌အဝတ်အချည်းစည်းရပ်နေ၏။
ငါဗလာအဓိကအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်၏မရှိခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လို့ထင်ပါတယ်။ ရောမ 3:23 "အားလုံးပွစျမှားပါနှငျ့ဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေပျက်ကြပြီ။ " ဗြာဒိတျ 3:18 တှငျကြှနျုပျတို့်ဗလာနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းဖတ်နှင့်ခေါ်ဆိုခနှင့်ကိုယ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဖြူရောင်အဝတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါလျှင်။ 1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး3လည်းအာဒံနဲ့ဧဝကျဆုံးခြင်းပြီးနောက်, ဥယျာဉ်တော်၌ဘုရားသခငျသညျလမ်းလျှောက်ကြားသိဘယ်လိုပြောပြနှင့်မည်သို့သူတို့ထံ၌ဝှက်ထား၏။
ဘုရားသခင်က "သင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း" အာဒံမေးတဲ့အခါသူကကိုယ့်ဥယျာဉ်၌ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်, အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောကြောင့်ငါကြောက်လန့်ခဲ့ "reply ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝှက်ထား၏။ "သင်သည်ဤစာသားကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျနော်တို့အပြစ်တရား၏အကျိုးဆက်များ၏အရှိဆုံးလေးနက်ကြည့်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသည်အကြားသဟာယတို့သည်ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုကျိုးအသိုင်းအဝိုင်းပင်ဘုရားသခင်အဘို့စေပြီရမယ်!
သူဟာချင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကိုဖန်တီးခဲ့ဘူး, ဒါပေမဲ့အခုတော့သူကပြု၏။ သူကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးလူနှငျ့အတူရငျးနှီးတဲ့ဆကျဆံရေးရှိသည်ချင်တယ်။ ဒီအရငျးနှီးသောဆကျဆံရေးဆာလံ 25:14 တွင် "ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်အတူထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ hobnob, သူတို့ကိုလူသိများသူစေသည်ပဋိညာဉ်တရားကို။ " ဒါဝိဒ်ကိုဖော်ပြထားတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်တရားကြောင့်အသေခံဤလောကသို့ကြွလာစေသောဘယ်လိုကြည့်ပါ။
ရောမမြို့ 5:12 ငါတို့သည် " သို့ဖြစ်. အပြစ်တရားအားဖြင့်, လောကီနှင့်သေခြင်းသို့ ဝင်. တယောက်သောသူအပြစ်တရားအားဖြင့်ကဲ့သို့၎င်း, အားလုံးပွစျမှားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေခြင်း, လူအပေါငျးတို့ဆီသို့ရောက် လာ. , ဒါကြောင့်။ " ကိုဖတ်ရှု
ယခုပင်လျှင် 1 ကမ်ဘာဦး3ခုနှစ်, ငါတို့ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ပုံသဏ္ဍာန်ယူကစတင်ခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ပါ။ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လာမယ့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုရည်ညွှန်းသောမိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်၏ဂတိတော်ကိုပေးသည်ဘယ်လိုဖတ်ပါ။ "သူသည်သင်၏ခေါင်းကိုနှိပ်စက်လိမ့်မယ်" ဟုဘုရားသခင်သည်မြွေကိုကပြောပါတယ်။ ဗြာဒိတျ 20 ငါတို့သည်မာရ်နတ်ကဲ့သို့တူညီသောသူသည်ရှေးမြွေဟောင်း, ကျော်ခရစ်တော်ရဲ့ပြတ်သားအောင်ပွဲ၏ကိုဖတ်ပါ။ သိန်သောဘုရားသခင်၏လူကွဲကွာကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အခြားသူများကိုအပြစ်ဖြေရာယဇ်နှင့်သူတို့၏အပြစ်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုမှတစ်ခါတစ်ရံဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဒုစရိုက်ဖြေအကြား, သားကောင်များထည့်သွင်းရန်ရွေးကောက်ပုံကိုအထူးသဖြင့်3ကမ်ဘာဦးထဲမှာ, ကျွတ်ကျမ်းများတွင်ကြည့်ပါ။ ဤရွေ့ကားသားကောင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘို့အလိုငှါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်သူ၏ယဇ်ပူဇော်သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ရှေ့ဆက်ညွှန်ပြခဲ့သည်။ သူကကိုယ်ကျိုးစွန်သိုးသငယ်နှင့်အပြစ်သောအယူအဆနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသူလူများပြောသောအခါ, ဘယ်အချိန်မှာယောဟန် 1 ကတည်းကဆရာယောဟနျ ", ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်" ဟုသူကသညျယရှေုကိုမြင်သောအခါကပြောပါတယ်။
အဆိုပါမသိမမြင်နိုင်သောဖြစ်ပွားခဲ့သည်; ဘုရားသခငျသညျ၏ကိုယ်ပိုင်ယဇ်ပူဇော်သိုးသငယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်၏ရှေ့ကိုတက်ရောက်လေ၏။ ကျွတ်ကျမ်းယဇျပူဇျောချွန်ရှေ့ဆက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကသူကမျြးစောငျ။ ကျဟရှောယအခန်းကြီး 53 အတွက်ကယ်တင်ရှင် "သူကကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အဘို့အနာကျင်စွာထိုးခြင်း, ငါတို့အပြစ်အဘို့အဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပြစ်ဒဏ်ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာဘို့ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ကြီးနှင့်သူ၏ဒဏ်ရာများအားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသည်ထိုသူ၌ထာဝရဘုရားကိုမိမိလမ်း, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေးမြီအပေါငျးတို့သသည် သွား. သိုးကဲ့သို့အားလုံးသွားကြောင်းလမ်းလွဲခဲ့ရသည်။ သူကရိုက်နှက်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချခြင်းနှင့်မိမိနှုတ်ကိုမဖွင့်ခဲ့သည်။ အသေသတ်ခြင်းမှဦးဆောင်နှင့်သိုးက၎င်း၏သိုးမှေးညှပျမတိုင်မီအသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်, ဒါကြောင့်သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်။ "သောသိုးသငယ်ကဲ့သို့
တစ်နှစ်တခါယဇ်ပုရောဟိတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဘို့နှင့်လူများရဲ့အပြစ်များအတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏အသွေးနှင့်အတူဌာန၏သန့်ရှင်းသောထဲသို့ဝင်သောအခါအ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ဖြေရာနေ့၏ကြီးမြတ်နေ့ကိုဖတ်ရှု3MOS 16 နဲ့ဟေဗြဲ9နှစ်ဦးစလုံး ဟေဗြဲ9ငါတို့ရှိသမျှအဘို့အတစ်ချိန်ကဘယ်လိုခရစ်တော်အားကိုဖတ်မိမိအသွေးနှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဌာန၏သန့်ရှင်းသောဝငျမြားနှငျ့ထာဝရရွေးနှုတ်ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တရား၏လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူကြသည်! ဒါဟာခရစ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်အဖို့အပြစ်မပါသောကိုယ်တော်တိုင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုပြောပြသည်။ 22 အခနျးငယျ "ပညတ္တိကျမ်းအသွေးနှင့်နီးပါးအရာအားလုံးကိုပြေတတ်နှင့်အသွေး၏သွန်းခြင်းမရှိဘဲအဘယ်သူမျှမလွှတ်သည်။ " သူကပြောပါတယ်
မိမိအယဇ်ပူဇော်သည်သေခြင်းမှတဆင့်, ယရှေုသညျကြှနျုပျတို့အတှကျဘုရားသခငျ၏မကျြနှာကိုရှေ့မှာမျက်နှာပြကောင်းကင်ကိုယ်ထဲသို့ဝင်လေ၏။ ဟေဗြဲ 10:19, 20 "ညီအစ်ကိုတို့, ယေရှုအသွေး၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ကျနော်တို့ယခုစိတ်ချလက်ချ, သန့်ရှင်းသော၏သန့်ရှင်းသောအထဲသို့သူကုလားကာတဆင့်ငါတို့အဘို့အဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအသစ်နှင့်အသကျရှငျသှားနိုငျသညျ, မိမိဇာတိပကတိ၌ဆိုတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ " ဗိမာနျတျော၏ကုလားကာ ထိုသို့အလွန်သန့်ရှင်းသောအနေအဘို့သန့်ရှင်းကွဲကွာသောထူသောကုလားကာဖြစ်ခဲ့သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသန့်ရှင်းသောအရပ်၏သန့်ရှင်းသောအထဲသို့ချက်ချင်းလမ်းကြောင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒါကုလားကာ, ရှိသေးသကဲ့သို့ဘုရားသခင်သို့ကိုယ်တော်တိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အားလုံးအခမဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ယရှေုသညျကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ, ကုလားကာအောက်ခြေထိပ်မှပြင်းစွာတိုက်ပုံကိုဖော်ပြထားသည်။ သူတို့ယုံကြည်နဲ့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံလျှင်ပြည်သူ့, နောက်တဖန်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအနီးကပ်သဟာယယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလုပ်နိုင်သညျယရှေုခရစျသမှကျေးဇူးတင်စကား။ ကမျြးစာကလည်းတနေ့အသစ်တစ်ခုကောင်းကင်နှင့်သစ်တစ်ခုမြေကြီး, ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူများကိုသူတို့နှင့်အတူနေထိုင်အတူဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါတစျနေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ် 21 ခုနှစ်ပြော၏။ အပြစ်တရား၏အဖျက်သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံပွနျလညျထူထောငျသညျယရှေုခရစျသနှင့်သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအောင်ပွဲမှတဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုနေ့ခြင်းတွင်ထိုသူသည်ငါတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုသုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သေခြင်းမပိုဝမ်းနည်းခြင်း, မငို, မဘေးဥပဒ်မဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏လုံးဝအပေါငျးတို့သမတရားသောသူတပ်ဖွဲ့များနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အစိုးရခြင်းအဆုံးသတ်ချေမှုန်းခြင်းနှင့်တင်ထားတော်မူမည်သည့်အခါနေ့ကိုရောက်ရလိမ့်မည်အကြောင်း,, 1 ကောရိန္သု 15:24 ကနေ 25 ငါသိ၏။ အားလုံးရန်သူများကိုမိမိခြေအောက်၌ဖုံးထားကြလိမ့်မည် (မြွေ၏ဦးခေါင်းကိုအမျိုးသမီး၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ရိုက်ချိုးခံခဲ့ရဘယ်လို 1 ကမ်ဘာဦး3အတွက်ဂတိတော်ကိုအောက်မေ့သတိရသညျယရှေုခရစျဖွစျသညျ) ။ 1 ကောရိန်သု 15 26 အခနျးငယျ "လူအပေါင်းတို့သည်အာဏာကိုဆုံးရှုံးနောက်ဆုံးသောရန်သူတည်းဟူသောသေခြင်းကို။ " ဟုဆို